Tontosa ny fanaovan-tsonia fifanaraham-piaraha-miasa eo amin’ny JIRAMA Antsiranana sy ny Fikambanana tsy miankina amin’ny fanjakana Graine de Vie Diana | JIRAMA
Tontosa ny fanaovan-tsonia fifanaraham-piaraha-miasa eo amin’ny JIRAMA Antsiranana sy ny Fikambanana tsy miankina amin’ny fanjakana Graine de Vie Diana
Izay miompana amin’ny fifanomezan-tanana ho fiarovana ny sahan-driakan’i Besokatra, Antsiranana II, nanomboka ny volana aogositra lasa teo.
Ny Fikambanana Graine de Vie no hiantoka ny fitaovana ilaina amin’ny fananganana taninjanakazo hamokarana zana-kazo 7000 isan-taona, ao Besokatra : karazana zana-kazo izay hiarovana ny sahan-driakan’i Besokatra sy ny faritra manodidina, sy zana-kazo fihinam-boa ho an’ny mpiara-monina ao Besokatra. Ary koa hampianatra ny fomba sy fepetra hambolena sy hikojakojana ny hazo izy ireo.
Ny JIRAMA kosa no hiandraikitra ny fampahafantarana ny tetikasa ary ny fanentanana ny mponina any an-toerana amin’ny famerenana indray ny ala sy ny ady amin’ny famongorana ny ala. Hametraka toha-drano mba hiarovana ny faritry ny ala ary hanendry tompon’andraikitra 2 eo an-toerana ho an’ny fikojakojana sy ny fanaraha-maso isan’andro ireo faritra misy ala.Natao izao ho fitandrovana ny toetry ny rano ao Besokatra manoloana ny fikorontanan’ny tontolo iainana, ary ho fanamafisana ny fanadiovana ny rano tsinjaraina amin’ny mpanjifa.
Natao izao ho fitandrovana ny toetry ny rano ao Besokatra manoloana ny fikorontanan’ny tontolo iainana, ary ho fanamafisana ny fanadiovana ny rano tsinjaraina amin’ny mpanjifa
Hisy ihany koa fifanaraham-piaraha-miasa hafa ho an’ny taona 2022 ho fanatsarana hatrany ny tolotra rano amin’ny faritra SAVA sy DIANA.